Ukusabalalisa kuvela enzalweni.
Abanye abalimi bahlwanyela ngokuqondile kodwa indlela ephumelela kakhulu yokutshala i-broccoli ngokwenza izithombo ematayini yenzalo futhi uma izithombo zingamamitha angu-150 ukuphakama bese zifakelwa emkhakheni.
Izitshalo ze-broccoli kufanele zihlukaniswe ngamasentimitha angu-40 kuya kwangu-50 emigqeni engama-50 cm. Lokhu kuphakathi kuka-30 000 no-40 000 izitshalo ngehektare. Kuhle futhi ukuzulazula imigqa yezihlahla ze-broccoli njengoba lokhu kuvumela izitshalo ukuthi zikhanyise kangcono nokuphuza umoya ngokusebenzisa izitshalo.
Imbewu ka-broccoli ivame ukuhlwanyelwa ngasekupheleni kwehlobo lapho amazinga okushisa eqala ukuwa. ENingizimu Afrika lokhu kuvela ngasekupheleni kukaFebhuwari ezindaweni ezipholile ukuya ekuqaleni kukaMeyi ezindaweni ezifudumele.
Cishe amasonto amane kuya kwamatsatfu emva kokuba imbewu itshalwe izithombo ze-broccoli kufanele zilungele ukutshala. Ukutshala eNingizimu Afrika kwenzeka kusukela ekuqaleni kuka-Ephreli kuya ekuqaleni kukaJuni. Kwezinye izindawo lapho izinga lokushisa nehlobo lokushisa ehlobo liphansi khona ngokwanele, kusenokwenzeka ukuthi uma isitshalo singavuna ngaphambi kokuba kufike isimo sezulu esishisayo.
I-Broccoli iyisitshalo esheshayo kunesinye i-Brassicas efana neklabishi. I-broccoli ingavunwa masinyane ngemva kwamasonto ayisithupha ngemuva kokutshala ngaphandle kwezithombo. Uma utshalwe lapho kukhula khona isikhathi eside phezu kwezinyanga zasebusika ezipholile, lokhu kunganciphisa intuthuko futhi lokhu kunweba isikhathi esakhulayo kuya kwamasonto ayisishiyagalolunye kuya kweshumi kusukela ekutshalweni kwezithombo. Isici esibaluleke kakhulu esichaza isikhathi sokukhula kanye nokuvunwa kwe-broccoli ukuqinisekisa ukuthi ukuvuna ngaphambi kokuba izinhloko ziqale ukuvuna.
Ukuhlaziywa kwenhlabathi kufanele kwenziwe. I-Broccoli iyinhlangano yokuphakelayo esindayo kuya esindayo. Hlanganisa uhlelo lwakho lomanyolo olujwayelekile ngomquba kanye / noma umquba njengenhlabathi ethandwa yi-broccoli ecebile yendaba ephilayo.
Isiphakamiso esijwayelekile ukuthi ngaphambi kokutshala, i-disc ukulima okungenani 800 kg we-2:3:4 ukuqinisekisa ukuthi i-broccoli yakho iqala kahle. Abanye abalimi bakhetha ukusetshenziswa komquba wezinkukhu ngaphambi kokutshala. I-Broccoli ngumlimi ophuthumayo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi kunezakhi ezanele ezitholakalayo emhlabathini phakathi kwamasonto okuqala okukhula ngoba lokhu kukhuthaza ukwakheka kwekhanda elihle, eliphakathi kwembali.
Izicelo ze-350 kg LAN ngehektha ngalinye emigqeni yezitshalo zinganikezwa ngamasonto amabili emva kokutshala kanye no-400 kg LAN ngehektha ngalinye emasontweni amane kuya kwamatsatfu emva kokutshala. Ungagcini kakhulu eduze nosuku lokuvuna olulindelekile.
Nisela izithombo ze-broccoli kanye ngosuku kuze zilungele ukutshala. Nisela futhi uhambise indawo okumele itshalwe ukuze izithombo zingatshalwa emhlabathini omanzi. Uma selitshalwa ngokushesha ukuchelela ukuze izitshalo zikwazi ukuhlala endaweni yazo entsha. Ngemuva kwalokho, kunisela phakathi kuka-25 mm no-35 mm wamanzi ngesonto kuye ngokuthi izinga lokushisa, imvula nenhlobo yomhlabathi.